Ukuthengisa Iimoto ezisebenzisiweyo ngokungekho mthethweni (Indlela yokungazi)
Ezinye iiRhumente zineemfuno ezizodwa okanye ziVimise imoto eSebenzisiweyo
Xa kufika ixesha lokuthengisa imoto yakho esetyenzisiweyo, ukhetho olulodwa olufunekayo ukuba lube luphawu lokuthumela "Ukuthengiswa" kwisithuthi sakho esasetyenziswa . Kwezinye iindawo zeli lizwe, unokufumana indleko ithikithi-okanye, ngakumbi nakakhulu - imoto yakho inokutsalwa. Ingxaki eWisconsin naseVirginia.
Isixeko saseMilwaukee ngoku sihlawulela abahlali abayi-$ 40 kwimvume yokuthengisa iimoto ezisetyenzisiweyo kwipropati yoluntu-okt ehleli kwizitrato zedolophu.
I-Commonwealth yaseVirginia ivimbela ukuthengisa iimpawu kwizithuthi, nazo.
Ukuthengisa Imoto Eyisebenzisiweyo eMilwaukee
Makhe siqwalasele kuqala kuMgaqo weMilwaukee (okhoyo ngokuya kwiMigaqo yeMilaphu yaseMilwaukee kwaye uphelele kwi-101 Code Traffic). Uya kufuna ukukhangela "101-29. Izithuthi ezithengiswa kwiiPropati zikaRhulumente. "Ngokuqinisekileyo, isixeko saseMilwaukee ngoku sihlawulela abahlali abayi-$ 40 ngencwadi yokuthengisa iimoto ezisetyenzisiweyo kwipropati yoluntu-okt ehleli kwizitrato zedolophu.
Kwaye akulula ukuyifumana le pemethe, nokuba. Umhlali waseMilwaukee kufuneka ahambe kwisebe lendawo yoluntu. Isebe lesebenzi likarhulumente kufuneka lihlole isithuthi kwaye liqinisekise ukuba inombolo yokuchithwa kwezithuthi ayizange ishintshwe.
Kukho umphumo omkhulu xa ungafumani le mvume. Imoto yakho iya kutsalwa kwaye uya kunyanzelwa ukuba uhlawule malunga ne-$ 125 ukubuyisela imoto yakho kwiqashiso elininzi - ngenxa yokuba uzama ukuthengisa imoto yakho esetyenzisiweyo kunye nentengiso yentengiso kwifestile.
Ummiselo awuyikucacisa phakathi kweemoto zaseMilwaukee ezipakiwe "ngeentengiso" kunye neGreen Bay iimoto ezifakwe uphawu kwifestile.
Ukuthengisa Imoto Eyisebenzisiweyo eVirginia
Ndatshitshiswa ngumfundi ukuba kukho umgaqo ofanayo kwi-Fairfax County, eVirginia. Ngokwenene, awukwazi "ukupaka isithuthi nganoma yiphina indlela okanye indawo kwaye ubeke uphawu lokuthengisa / indawo yokuqashisa kwiwindow yayo." Imiphumo ayikho nzima.
Imoto yakho ayiyi kuhoxiswa, kodwa unokuhlangabezana netikiti ezingama-50.
Kulabo abaya kwii-wording zobuchwepheshe zomthetho, uthi:
Icandelo 82-5-19. Ukupaka ngeenjongo ezithile ezivunyelwe.
(a) Kuya kuba mthethweni kunoma yimuphi umntu:
(1) Ukupaka okanye ukubeka nayiphi na imoto, iilori, i-trailer okanye enye imoto kuyo okanye nasiphi na isitalato, i-alley okanye i-parkway ngenjongo yokuthengisa okanye ukunikezela efanayo ukuthengisa okanye ukuqesha;
(2) Ukuqhagamshela okanye ukubeka nayiphi na uphawu okanye i-lettering kuyo nayiphi na imoto, iloli, i-trailer okanye enye imoto emiswe kuyo okanye nasiphi na isitrato sikarhulumente, umzila okanye indawo ebonisa ukuba isithuthi esinjalo sinikwe ukuthengiswa okanye ukurenta.
Ngoku, andiyena ugqwetha, andinako ukusetyenziswa njengomthombo weengcebiso zomthetho, kodwa emva kweminyaka engama-30 kwi-journalism (kunye neminyaka emine kwezopolitiko), ndinokufunda indlela yam malunga nomthetho osemthethweni. Ndiyifunde imimiselo efanelekileyo: 46.2-1508.2: Ukubonisa, ukupaka, ukuthengisa, ukuthengiswa kweentengiso zezithuthi ezithile ezisetyenzisiweyo. (Nantsi itekisi yomthetho.) Ithi imoto kufuneka imiswe iiyure ezingama-48 kwaye kufuneka isilumkiso sifakwe kwisithuthi. Kuphela ke kunokuthi ithengiswe.
Umfundi ondixelele ngamava akhe epaka imoto yakhe esitalato phambi kwendlu yakhe yaseFlorfax County.
Wathi uthe wahlala neSayina sokuThengisa kwiwindow malunga neveki ezintathu xa efumana ithikithi e-Alexandria. Akukho mntu kumakhelwane wakhe wamxelela ukuba kwakungekho mthethweni mhlawumbi kuba kungekho mntu wayazi! Kanti akazange athole naluphi na uhlobo lwesilumkiso esivela kwigosa lamapolisa okanye kwi-zoning ezisemthethweni. Kunokwenzeka, nangona kunjalo, kwaye andinakukwazi ukuba i-Fairfax County inehlukile kumthetho welizwe ngokomthetho wayo.
Njengoko uJaime ekhomba kwi-imeyile yakhe, "Kuze kube nantoni na into endiyithethileyo kumama 'umjikelezo womama' wayengazi malunga nale nto. IVirginia (ubuncinane i-Aleksandria apho ndikhona khona) kukuxuba imikhosi kunye nabanye abantu abaphakathi nakwamanye amazwe angayi kuba nesizathu sokwazi lo mthetho nonke. "
I-county ingathi ingcaciso iyafumaneka kwiwebhusayithi yayo. Ndiyinika i-Fairfax County ngetyala ngokuba ne-website efanelekileyo kodwa nangona ulwazi lusekho, amagosa asebupoliseni asadingeka ukuba akhuphe izibhengezo ngaphambi kokunikezela amathikiti angama-50 okwephulo-mthetho.
Imfundo ibaluleke kakhulu njengokunyanzeliswa kwiimeko ezifana nale.
I-State of Texas Salvage Imithetho yeeLayiti
Funda nini ukuthenga iCar Used) ngo-2020
I-Top 10 2005 kunye no-2006 I-Car Car Deals
Hlola Imbali Yemoto Yasetyenzisiweyo Yenkululeko
Ingxowa Iyinkosi Xa Ithengisa Imoto Eyisebenzisiweyo
8 Amanyathelo okugqiba ukuthengiswa kweemoto ezisetyenzisiweyo
Ukuqonda i-California Ukusebenzisa iMithetho yokuLondolozwa kweMoto
Iimveliso kunye neengxaki zokuthengwa kweeNkonzo zeenqwelo zee Car
Kutheni ufuna ukuthenga i-Avananche yase Chevrolet esetyenzisiweyo
Ngaba Isisetyenziselwe Ukuthenga i-Suzuki esetyenziswayo?
Yintoni i-Architecture ye-Neotraditional?
Ubambe isiKhokelo se-Ostara kwiSolitari
Kutheni Kubalulekile Ukuba Iintlobo Ziya Kuphela
Yintoni iNzululwazi engqongileyo?
Funda Ukusetha Uhla lwe-2-Stroke Ugalelo kwixesha lakho leSithuthuthu
UkuPhelelwa Kwokulala, i-Incubus ne-Succubus
Inkohliso Yenyama Yenyama
Eight Eight Great Soprano Soloists
IlaseGalili ngexesha lexesha likaYesu laliyiziko lokutshintsha
Ukufumana nokuThathela i-Redfish
Imfazwe yaseSpain-Amerika: iMfazwe yaseSantiago de Cuba
Iingoma ezidumile zeKISS zee-80s
Ithini i-cal BP ithetha?
I-Macromolecule Inkcazo kunye nemizekelo
I-Biography kaTatum O'Neal, Oyena mncinci u-Oscar Winner
Izithuthi zeCrysler zeZithuthi